Soo dejisan Pidgin 2.13 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Pidgin
Bijin – software ah in ay la saaxiibadaa ee internet-ka xiriiraan. software The taageertaa hab maamuuska loo jecel yahay, ICQ, AIM, Google Talk, MSN, Bonjour, XMPP, Yahoo !, IRC, iwm bijin awood in ay is dhaafsadaan faylasha, u furan dhowr tabs furmo wadahadalka iyo midoobaan xiriirada ee group caadi ah. software The kuu ogolaanayaa inaad in ay ku xidhmaan xisaabaadka kala duwan isku mar. Bijin ku jira tiro balaadhan oo ah qalab loogu talagalay Iyada oo, kaas oo aad loo ballaarin karo by xira daro kala duwan. software waxay leedahay interface ah dareen leh oo fudud.
Taageerada Axdiyada ugu
Ku xiridda oo ka mid ah xisaab kala duwan isku mar
Midaynta of xiriirada in metacontacts ah
Sirta ah chat
Soo dejisan Pidgin
Faallo ku saabsan Pidgin
Pidgin Xirfadaha la xiriira
Tool si ay ula xiriiraan dadka isticmaala oo dunida ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod iyo xiriiro hab ka mid ah muuqaal.
Software si ay u sameeyaan cod ama video baaqyo iyo soo diro fariimo qoraal ah. Waxaa jira ah .Wadashaqayntaas xiriir toos ah qalab isticmaalaha.
Farriinta haboon si ay ula xiriiraan saaxiibo agagaarka meeraha. Sidoo kale waxay taageertaa isdhaafsiga faylasha, wicitaanada fiidiyoowga iyo la sheekeysiga saaxiibada ka socda Facebook.
Ciyaaryahanka functional inuu u ciyaaro files warbaahinta. software The taageertaa qaabab loo jecel yahay oo kuu ogolaanaya in aad soo saaro track maqal ah ka files video.
Minecraft – waa ciyaar caan ah oo lagu dhisayo dhismayaal kala duwan oo dunida laga sameeyay oo laga sameeyay baloogyada. Ciyaartoygu wuxuu marin u helayaa qaabab kala duwan oo ciyaarta iyo waxyaabo badan oo wax laga beddelo si loo ballaariyo suurtagalnimada.
Panetarium desktop ayaa si aad u eegto Samada samada 3D. Software waxay bixisaa qaab tayo sare oo ka mid ah xiddigaha kala duwan, xiddigaha iyo waxyaabaha kale ee meel dibadda ah.